> Resource> iPad> Olee otú ndabere iPad faịlụ ka mpụga ike mbanye
"My fọrọ nke nta zuru 64 GBs iPad (iOS 9) na-eri m elu HD. M nwere dị ka 200 MBs ekpe! Enwere ụzọ zọpụta nkwado ndabere na mpaghara na-mpụga HD iji zọpụta ya n'ihi mgbe ọ bụla m mkpa iji weghachi?"
Chọrọ ndabere iPad faịlụ ka mpụga ike mbanye ghara na ihe na-atụghị anya ga-eme, na-eme nnukwu data ọnwụ? Kpebie na-ere gị ochie iPad, otú ị na-na na na-achọsi ike ndabere faịlụ niile na iPad tupu ndibiat? N'agbanyeghị ihe ọ bụla kpatara ya bụ, i nwere ike na-aghọta na ọ bụghị ihe dị mfe ndabere iPad ka mpụga ike mbanye. Ọ bụ ezie na Apple-enye gị ohere mbupụ foto na video ogbugba na gị iPad mgbe ọ bụla ị jikọọ iPad na kọmputa site na eriri USB. Otú ọ dị, ọ bụ ka dị nnọọ ịbụ ezu, n'ihi na mgbe ụfọdụ, ị na-achọ ndabere music, kọntaktị, ozi na ndị ọzọ. Aka dị ka iTunes bụ, iPad ndabere faịlụ a ga-kpọmkwem na iTunes, otú ị ka nwere ike iṅomi ya na mpụga ike mbanye.
Ọ bụrụ na nke a bụ gị ikpe, m ukwuu nwere ike ikwu na ị na ihe dị mfe na-eji iPad ndabere ngwá ọrụ - na Wondershare TunesGo Ochie (Windows). Ọ na-ahapụ gị ndabere iPad music, listi ọkpụkpọ, fim, photos, kọntaktị, SMS, music videos, TV na-egosi, audiobook, iTunes U na pọdkastị ka mpụga ike mbanye. E wezụga, faịlụ kwadoo na-nnọọ mfe ịgụ na-eji.
N'ihi na Mac ọrụ, biko na-atụgharị nke Wondershare TunesGo Ochie (Mac). Nke a Mac version-enyere gị aka ndabere photos, fim, egwú, music videos, pọdkastị, iTunes U, audiobook-egosi na TV si iPad ka mpụga ike mbanye, iOS 9 iPad akwado.
Mfe nzọụkwụ nkwado ndabere na mpaghara iPad faịlụ ka mpụga ike mbanye
Na-ahọrọ nri mbipute a software na ibudata ya na gị na Windows PC ma ọ bụ Mac. Ebe a, na-ahapụ 'ime iPad ndabere ka mpụga ike mbanye na Windows version.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ iPad na mpụga ike mbanye na PC
Jiri USB Gịnị jikọọ ma nke iPad na mpụga ike mbanye na PC. Na-agba ọsọ a software. Mgbe gị iPad achọpụtara, ọ ga-egosi na ihe bụ isi window nke software. Na, na mpụga ike mbanye ga-emere na kọmputa gị kwa.
Cheta na: The Windows na Mac nsụgharị nke TunesGo Ochie software nkwado akwado faịlụ na iPad Obere, iPad na Retina ngosi, iPad 2, iPad Air, The New iPad na iPad na-agba ọsọ iOS 5, iOS 6, iOS 7, iOS 8 na Kacha ọhụrụ iOS 9 na mpụga ike mbanye.
Nzọụkwụ 2. ndabere iPad faịlụ na mpụga ike mbanye
Ke akpan window, na-aga Export Music ka nchekwa na ala akara. Mgbe ahụ, na-agagharị kọmputa gị ga-a nchekwa na mpụga ike mbanye. Mgbe ahụ, nke a software uche ndabere nile songs na gị iPad ka mpụga ike mbanye.
Back elu iPad music, videos, foto, na kọntaktị na SMS ka mpụga ike mbanye.
Na-ekpe sidebar, iche iche pịa Media, Playlist, Photos, Ndi ana-akpo na SMS. Mgbe ahụ, kwekọrọ ekwekọ windo na-egosi na nri ebi ndụ.
Site na ịpị Media, ị nwere ike ndabere music, fim, egwú videos, pọdkastị, TV na-egosi, audiobook na iTunes US Geological
Pịa Playlist na họrọ gị chọrọ listi ọkpụkpọ. Pịa Mbupụ na. (Ọ bụ dị na Windows version.)
Pịa Photos> ahọrọ photos> Mbupụ na nkwado ndabere na mpaghara họrọ ma ọ bụ niile iPad photos ka mpụga ike mbanye.
Pịa Ndi ana-akpo> Họrọ kọntaktị> Export na. (Ọ na-nwere ike mere na Windows version).
Pịa SMS> tinye akara iMessages, MMS & ozi ederede> Export na. (Naanị Windows version-ahapụ gị ime nke a.)
Lee, nke ahụ bụ mfe ndu banyere otú ndabere iPad (iOS 9 akwado) na mpụga ike mbanye. Site n'enyemaka nke a software, ị nwekwara ike ndabere faịlụ na iPad ka iTunes ma ọ bụ ndị ọzọ iOS ngwaọrụ enweghị a ikedo.
Download TunesGo Ochie na-agbalị akwado iPad ka mpụga ike mbanye.
Na-ekiri ndị video nkwado ndabere na mpaghara ipad faịlụ ka mpụga ike mbanye